मुख धुँदा कहिलै नगर्नुहोस् यी गल्ती, डण्डिफोरले सताउनेछ – Wow Sansar
Prevयी हुन् भारतकी सबैभन्दा धनी युवती, कसरी जोडिन् भारु ५ खर्ब ४० अर्ब ८० करोड ५० लाख ?
Nextअहिले यी पुरानो नोटको भाउ लाख भन्दा पनि बढी छ ! भयकोले तुरुन्तै यसरी बेचौं ! कहाँ कसरी ? बेच्ने तरिका..हेर्नुहोस्”